Izindlela eziyi-13 zokuqukethwe okwenza imali ku-inthanethi | Martech Zone
Umngani omuhle ungithintile kuleli sonto wathi unesihlobo esinesayithi ebelithwala kakhulu futhi bafuna ukubona ukuthi zikhona yini izindlela zokwenza imali kubabukeli. Impendulo emfushane inguyebo… kepha angikholwa ukuthi iningi labashicileli abancane liyalibona ithuba noma ukuthi bangayikhulisa kanjani inzuzo yendawo abanayo.
Ngifuna ukuqala ngamasenti ... bese ngisebenza emalini enkulu. Khumbula ukuthi lokhu akuphathelene nokwenza imali ibhulogi kuphela. Kungaba yinoma iyiphi impahla yedijithali - njengohlu olukhulu lwababhalisile be-imeyili, isizinda esikhulu kakhulu se-Youtube, noma ukushicilelwa kwedijithali. Iziteshi zomphakathi azenzi kahle njengoba zibonwa njengabanikazi bepulatifomu kune-akhawunti eqoqe okulandelayo.
Khokha Ngokuchofoza Ngokukhangisa - eminyakeni eminingi eyedlule, isethulo engisibukile emcimbini obizwa ngalezi izixazululo zomshicileli inhlalakahle ye-webmaster. Luhlelo olulula kakhulu ukulusebenzisa - ukufaka nje imibhalo ethile ekhasini lakho ngezinye izikhala zezikhangiso. Izikhala ziyabizwa bese kukhonjiswa izikhangiso eziphakeme kakhulu zebhidi. Awenzi mali, noma kunjalo, ngaphandle kwalapho leso sikhangiso sichofozwa. Ngenxa yokuvinjelwa kwezikhangiso nokuwohloka okuvamile kwezikhangiso ngokujwayelekile, amanani okuchofoza kwizikhangiso aqhubeka ukwehla… njengoba kwenza neholo lakho.
Amanethiwekhi wesikhangiso wangokwezifiso - amanethiwekhi wokukhangisa avame ukusithinta ngoba angathanda ukuba nesikhangiso esizotholwa yisiza lesi sayizi. Ukube bengiyindawo evamile yabathengi, bengingahle ngigxume kuleli thuba. Izikhangiso zigcwele ukuchofoza kanye nezikhangiso ezesabekayo (ngisanda kubona isikhangiso sezinzwani kwenye indawo). Ngilahla lawa manethiwekhi ngaso sonke isikhathi ngoba imvamisa abanabo abakhangisi abafanelekile abancoma okuqukethwe nezithameli zethu. Ngabe ngidela imali? Impela… kepha ngiyaqhubeka nokukhulisa izethameli ezingakholeki ezibandakanyekile futhi eziphendulayo ekukhangiseni kwethu.
Izikhangiso ezihambisanayo - amapulatifomu afana neKhomishini Junction kanye shareasale.com babe namathani abakhangisi abazimisele ukukukhokhela ukuze ubakhuthaze ngezixhumanisi zombhalo noma izikhangiso esizeni sakho. Eqinisweni, isixhumanisi se-Share-A-Sale engisanda kwabelana ngaso siyisixhumanisi esihambisanayo. Qiniseka ukuthi uhlala ukudalula ukuwasebenzisa kokuqukethwe kwakho - ukungadaluli kungaphula imithethonqubo yenhlangano e-United States nakwamanye amazwe. Ngiyazithanda lezi zinhlelo ngoba imvamisa ngibhala ngesihloko esithile - bese ngithola ukuthi banohlelo lokubambisana engingalufaka isicelo. Kungani ngingeke ngisebenzise isixhumanisi esihambisanayo kunaleso esiqondile?
Amanethiwekhi we-Ad Ad and Management - ngokulawula uhlu lwakho lokukhangisa nokwenza ngcono intengo yakho, ungasebenzisa ipulatifomu yemakethe lapho ungaba nobudlelwano ngqo nabakhangisi bakho futhi usebenze ukuqinisekisa impumelelo yabo ngenkathi wenza inzuzo yakho ibe ningi. Singasetha intengo yanyanga zonke, izindleko ngombono ngamunye, noma izindleko ngokuchofoza ngakunye kuleplatifomu. Lezi zinhlelo zikuvumela futhi nezikhangiso zokulondoloza - sisebenzisa iGoogle Adsense ngalokho. Futhi bayakuvumela indlu izikhangiso lapho singasebenzisa khona izinkampani ezihambisanayo njengesipele.
Ukukhangisa Kwabantu Bomdabu - Kumele ngikutshele ukuthi le ingenza ngikhwantabalise kancane. Ukukhokhelwa ukushicilela i-athikili yonke, i-podcast, iphrezentheshini, ukuyenza ibonakale njengokunye okuqukethwe okukhiphayo kubonakala kuthembekile impela. Njengoba ukhulisa ithonya lakho, igunya nokuthembela kwakho, ukhulisa inani lempahla yakho yedijithali. Lapho ufihla leyo mpahla futhi ukhohlisa amabhizinisi noma abathengi ekuthengeni - ubeka konke okusebenze kanzima ukuze udale ingozi.
Izixhumanisi ezikhokhelwayo - Njengoba okuqukethwe kwakho kuthola ukugqama kwenjini yokusesha, uzokhonjwa yizinkampani ze-SEO ezifisa ukuxhuma emuva kusayithi lakho. Bangase baphume ngaphandle bakubuze ukuthi ungabeka malini isixhumanisi. Noma bangakutshela ukuthi bafuna nje ukubhala i-athikili futhi bangabalandeli abakhulu besayithi lakho. Banamanga, futhi bakubeka engcupheni enkulu. Bakucela ukuthi wephule imigomo yesevisi ye-Injini Yokusesha futhi kungenzeka ukuthi bakucele nokuthi wephule imithethonqubo kahulumeni ngokungabudaluli ubudlelwano bemali. Ngenye indlela, ungenza imali ngezixhumanisi zakho ngokusebenzisa injini yokwenza imali njengesixhumanisi VigLink. Banikeza ithuba lokudalula ngokuphelele ubudlelwane.
Ithonya - Uma ungumuntu owaziwa kakhulu embonini yakho, ungahle ufunwe ngamapulatifomu anethonya nezinkampani zobudlelwano bomphakathi ukuze ubasize baphakamise imikhiqizo yabo kanye nezinsizakalo ngama-athikili, izibuyekezo zemidiya yezenhlalo, ama-webinars, izinkulumo zomphakathi, ama-podcast, nokuningi. Ukumaketha komthelela kungaba yinzuzo enkulu kepha khumbula ukuthi kuhlala kuphela uma nje ungaba nomthelela ekuthengiseni - hhayi ukufinyelela nje. Futhi, qiniseka ukudalula lobo budlelwano. Ngibona abagqugquzeli abaningi embonini yami abangatsheli abantu ukuthi bayakhokhelwa ukufaka imikhiqizo nezinsizakalo zenye inkampani. Ngicabanga ukuthi ukungathembeki futhi babeka idumela labo engcupheni.
Ukusekela - Ipulatifomu yethu yemakethe nayo isivumela ukuthi sibeke indlu izikhangiso kanye nama-bill amaklayenti ethu ngqo. Sivame ukusebenzisana nezinkampani ukwenza imikhankaso eqhubekayo engafaka ama-webinars, ama-podcast, ama-infographics, namaphepha amhlophe ngokungeziwe kuma-CTA esiwashicilela ngezikhala zezikhangiso zendlu. Okuhle lapha ukuthi singakwazi ukukhulisa umthelela kumkhangisi futhi sisebenzise wonke amathuluzi esinawo ukuqhuba inani lezindleko zoxhaso.
Okudlulisiwe - Zonke izindlela kuze kube manje zingalungiswa noma amanani aphansi. Cabanga uthumele isivakashi kusayithi, bese bathenga into engu- $ 50,000, bese wenza i- $ 100 ngokubonisa ukubizelwa esenzweni noma i- $ 5 ngokuchofoza. Uma kunalokho, uxoxisane nekhomishini engu-15% yokuthenga, ungenza u- $ 7,500 ngokuthenga okukodwa. Ukudluliselwa kunzima ngoba udinga ukulandelela ukuhola uye ekuguqulweni - okudingayo ikhasi lokufika elinenkomba yomthombo ehlohla irekhodi ku-CRM ekuguqukeni. Uma kungukubandakanya okukhulu, kungathatha izinyanga ukuvala… kepha kusazuzisa.
Consulting - Uma ungumuntu onethonya futhi unokuqukethwe okukhulu okulandelayo, mhlawumbe futhi ungungoti ofunwayo emkhakheni wakho. Iningi lemali yethu engenayo kule minyaka edlule bekubonisana nezinkampani zokuthengisa, zokumaketha, nezobuchwepheshe ukuthi zingakhula kanjani igunya labo futhi bathembele ku-inthanethi ukugcina nokukhulisa ibhizinisi labo.
Izenzakalo - Uzakhele izithameli ezibandakanyekile ezamukela iminikelo yakho… ngakho-ke kungani ungathuthukisi imicimbi esezingeni lomhlaba eguqulela izethameli zakho ezithandekayo zibe umphakathi onolaka! Imicimbi inikela ngamathuba amakhulu kakhulu okwenza imali ngezethameli zakho kanye nokuqhuba amathuba amakhulu oxhaso.
Imikhiqizo Yakho - Ngenkathi ukukhangisa kungakhiqiza imali ethile futhi ukubonisana kungaveza imali ebonakalayo, zombili zikhona uma nje iklayenti likhona. Lokhu kungaba ukuguquguquka kwamahla ndenyuka njengoba abakhangisi, abaxhasi, namakhasimende eza futhi ehamba. Kungakho abashicileli abaningi bephendukela ekuthengiseni imikhiqizo yabo. Empeleni sinemikhiqizo eminingana ekuthuthukisweni njengamanje ukunikeza izethameli zethu (funa ukwethulwa okuthile kulo nyaka!). Ubuhle bokuthengisa uhlobo oluthile lomkhiqizo osuselwe ekubhaliseni ungakhulisa imali yakho ngendlela efanayo njengoba ukhulise izithameli zakho… ngasikhathi sinye futhi, ngomfutho, ungathola imali ethile engenayo ngaphandle komuntu ophakathi nendawo osikiwe .
For Sale - Izindawo ezisebenza ngokwengeziwe zedijithali zithengwa ngqo ngabashicileli bedijithali. Ukuthenga impahla yakho kwenza abathengi bakwazi ukwandisa ukufinyelela kwabo futhi bathole okwengeziwe kwenethiwekhi kubakhangisi babo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukukhulisa ukufundwa kwakho, ukugcinwa kwakho, uhlu lwakho lokubhaliselwe kwe-imeyili, kanye nethrafikhi yakho yokusesha ye-organic. Ukuthenga ithrafikhi kungaba yindlela ongayikhetha ngokusesha noma ngokuxhumana nomphakathi - inqobo nje uma ugcina ingxenye enhle yaleyo thrafikhi.
Sikwenze konke okungenhla futhi manje sibheke ukukhulisa impela imali yethu ngo- # 11 no # 12. Zombili lezo zinto zizosibeka kubathengi abazoba khona uma sesibenze baqala ukusebenza. Sekudlule iminyaka eyishumi selokhu saqala futhi kungathatha enye iminyaka eyishumi ukufika lapho, kepha asingabazi ukuthi sisendleleni. Izakhiwo zethu zedijithali zisekela abantu abangaphezu kweshumi nambili - futhi lokho kuyaqhubeka nokukhula.
Tags: amanethiwekhi wesikhangiso-adSenseamanethiwekhi wokukhangisai-adwordslobulunguisixhumanisi sokubambisanaimali engenileConsultingizenzakaloithonyaukuthonya ukumakethaukwenza imali onlineIzingqungquthela Zokumakethaukwenza imaliyenza imali ibhulogi yakhoyenza imali nge-podcast yakhoyenza imali ngevidiyo yakhoimaliizixhumanisi ezikhokhelwayoukukhushulwa komkhiqizoImali yokudluliselaukudluliselwathengisa isizinda sakhothengisa isiza sakhoukuxhaswaamandla
Jan 16, 2017 ku-8: 28 AM
Lezi izindlela eziningi ezisemthethweni zokwenza imali kokuqukethwe kwewebhusayithi okukhiqiza ithrafikhi, uma unayo. Kukhona nemingcele, kanye nobungozi bezinhlobo ezithile zezindlela zokwenza imali, njengakwisikhangiso se-PPC nezixhumanisi ezikhokhelwayo, njengoba kuchaziwe. Umsebenzi omuhle owenziwe ekuletheni lonke ulwazi lwakho nokulawula phambili ekubhaleni lokhu okuthunyelwe. :)
Jan 16, 2017 ku-11: 32 AM
Ngiyabonga kakhulu, Beth!